Isikhombisi esiphezulu sokufakwa rhoqo kweengqimba zokuncamathela
Ikhaya / izicelo / Ukunyusa ukunyusa / UkuPhakanyiswa okuQhelekileyo okuQhelekileyo okuPhelayo kweeNxalenye zokuSonga
iindidi: izicelo, Ukunyusa ukunyusa tags: Ukucwangciswa kobushushu obuhamba rhoqo, I-preheat yolwazi, ukuqulunqa ukutshiza, ukutyunjwa komshini wokucoca, yokuqulunqa inkqubo, i-preheat yokuluka, imisonto preheat, ukutshisa
Umthengi ulungiselela iindawo ezahlukeneyo ukuze emva koko azisongele. Injongo yolu vavanyo kukucoca indawo nganye ukuya kwi-600 ° F (316 ° C) kwimizuzwana engaphantsi kwe-30.
Umshini wokufudumala u-HF-15
Iinxalenye zeesampulu zazinikezelwa ngumthengi. Oku kubandakanya:
Icandelo 1 lenziwe yintsimbi enemagnethi nge-0.375 ”(9.525mm) OD
• Icandelo 2 liqulathwe yintsimbi yemagnethi nge-0.5 ”(12.7mm) OD
Icandelo 3 lenziwe yintsimbi enemagnethi nge-0.875 ”(22.225mm) OD
• Icandelo 4 liqulathwe yintsimbi yemagnethi nge-1.5 ”(38.1mm) OD
• Kusetyenziswe iikhoyili ezimbini. Ikhoyili 1 yokufudumeza inxenye ye-4 nge-1.5 ”(38.1mm) OD. Zonke ezinye iindawo zazifudunyezwa ngekhoyili 2.
Ubushushu: malunga ne-600 ° F (316 ° C)
• Icandelo 1: 1.68 kW
• Icandelo 2: 2.6 kW
• Icandelo 3: 4.74 kW
• Icandelo 4: 3.79 Kw
Ixesha: ngaphantsi kwemizuzwana engama-30
Icandelo laligxilwe kwikola.
I-DW-HF-15kw Induction Heating Power Supply yavulwa.
Iqondo lokushisa libekwe esweni ngekhamera ye-infrared kunye nepeyinti yeTempilaq.
Onke amalungu akwazi ukuvavanywa kusetyenziswa useto lwezixhobo ezifanayo. Akukho lutshintsho lwalufuneka phakathi kwemijikelezo yobushushu, ngaphandle kokutshintsha i-coil kwiCandelo le-4. Oku kungenxa yendlela eguquguqukayo ye-DW-HF-15kw Induction Heating Power Technologies 'evumela ukuba inkqubo yokufudumeza ihambisane nemithwalo eyahlukeneyo.
Inkqubo ephindwayo, ayixhomekeki kwinkampani xa amalungu esetiweyo kwindlwana okanye kulungiso
Ukufudumeza kwentsimbi ibanjwa yentsimbi
I-Post Welding Stress I-Relieving-Induction Preheat Welding